Nyowani illy art kuunganidzwa yakasainwa naMona Hatoum yakatangwa na illycaffè
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Nyowani illy art kuunganidzwa yakasainwa naMona Hatoum yakatangwa na illycaffè
illycaffè inopa iyo nyowani illy Art Unganidzo uye, kwenguva yekutanga, inofanidza makani akashongedzwa akasainwa naMona Hatoum.
Aine hunyanzvi hwekumashure kwemakumi mana emakore, muoni anoona Mona Hatoum anozivikanwa pasirese nekuda kwenyaya yake yenhetembo nezvematongerwo enyika, inoonekwa mune dzakasiyana siyana uye kazhinji zvisingaenderane nhepfenyuro, kusanganisira kumisikidza, kuvezwa, vhidhiyo, kutora mifananidzo uye kushanda papepa.
Hatoum akatanga kuve anozivikanwa pakati pe1980s akateedzana emitambo uye nemavhidhiyo mabasa anotarisisa zvakanyanya pamuviri.
Kubva kutanga kwema1990 basa rake rachinjira kumahombekombe makuru uye zvivezwa zvine chinangwa chekubata muoni mukunetsana kwemanzwiro echishuwo uye kusagadzikana, kutya uye kufarira.
Kubva ipapo, anoenderera mberi nekuvandudza mutauro mune izvo zvinozivikanwa, zvekumba zvinhu zvezuva nezuva zvinowanzo shandurwa kuita zvekune dzimwe nyika, surreal kana kutyisidzira zvinhu.